Ku saabsan Viljaskolan - iskuul cusub oo ku yaal Angered oo leh iskuul bilaabmaya Agoosto 2021
Waxaan u adeegsanaa Google Translate inaan u turjunno qoraallada ku jira degelkeenna. Ma qaadi karno masuuliyada dhamaan tarjumaadaha inay sax yihiin. Hadday khaladaad jiraan ama haddii aad caawimaad u baahan tahay, fadlan nala soo xidhiidh.
Xilligan Viljaförskolan Nala soo xiriir Other languages
Ku saabsan Viljaskolan
Ka shaqee Viljaskolan
Viljaskolan waa dugsi ku cusub Angered oo bilaabmay Agoosto 2021. Waxaan go'aansanay inaan abuurno dugsiga ugu fiican halkaas oo aan rabno inaan siino ilmo kasta fursad dhab ah oo uu ku guuleysto.
Viljaskolan waxay dhismeheedu ku yaalaan dhismihii hore ee ABF ee Spadegatan 3, oo 500 mitir u jira Angereds Centrum. Dhismihii iyo barxaddii dugsiga gabi ahaanba waa la dayactiray, waxaanan leenahay jiko noo gaar ah oo aan ku karsanno cuntada maqaashinada dugsiga. Dareen xor u ah inaad eegto keenna film halkaas oo aad ka arki karto halka dugsigu ku yaal!
Macalimiin khibrad iyo karti leh
Viljaskolan waxa ay shaqaaleysiisaa macalimiin shati haysta si uu ilmahaagu u helo shuruudaha ugu fiican. Macalimiintayada waxaa ka go'an in ilmo kasta uu gaaro hadafkooda. Waxaan rabnaa xiriir dhow oo aan la leenahay qoyskaaga, waxaanan rabnaa in mar walba lagugu soo dhaweeyo Viljaskolan. Dareen xornimo inaad eegto bandhigyadayada shaqaalaheenna Bogga wararka!
Jawi nabdoon oo xasilloon
Arday kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo jawi nabadgelyo iyo xasillooni leh, waa shardi muhiim u ah guusha dugsiga. Waxa kale oo muhiim ah in ilmahaagu dareemo farxad kahor dugsiga, waxay siinaysaa rabitaanka barashada waxyaalo cusub iyo ka shaqaynta si loo gaadho himilooyinka dugsiga.
Ogaanshaha luqado badan waa hanti aad u wanaagsan. Waxaa laga yaabaa inaad leedahay af hooyo oo aan ahayn iswiidhishka oo aad taqaano dhowr luqadood oo kale. Aqoonta luuqada iswiidhishka ayaa isla mar ahaantaana shuruud muhiim u ah laqabsashada dugsiga iyo ka mid noqoshada bulshada. Sidaa darteed, waxaan diirada saareynaa cunugaada inuu aqoon fiican u leeyahay luqada iswiidhishka isla markaasna aan ku dhiirigelinno horumarinta luqadaha kale ee ilmahaagu ku hadlo.
Hadaanu nahay Viljaskolan, waxaan aaminsanahay inay ugufiican tahay maalgalinta taageerada goor hore ee horumarka caruurta. Sidaa darteed waxaan la soconaa oo qiimeynaa ilmo kasta si taxaddar leh si qof walba u horumariyo oo u gaaro himilooyinkiisa. Ilmuhu sidoo kale wuxuu u baahan yahay taageero iyo dhiirigelin guriga ah si shaqada dugsiga ay si fiican ugu socoto. Wada shaqeynta qoyska ayaa muhiim noogu ah Viljaskolan.
Wadajir ilmo kasta
Cilmi baaris iyo khibrad ayaa muujineysa in wada shaqeynta ka dhaxeysa iskuulka ay keento natiijo wanaagsan, qof kasta oo ka shaqeeya iskuulka waxaa looga baahan yahay inuu la shaqeeyo si looga dhigo sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan cunug walba. Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan la shaqeyno qoyskaaga. Adiga ayaa ilmaha sida ugu fiican u yaqaana oo guriga ku siin kara taageero iyo dhiirigelin. Waxaan sidoo kale aaminsanahay in loo baahan yahay iskaashi dhexmara dad badan oo iskuulka ka agdhaw: ururada isboortiga, ganacsatada, ururada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee adiga iyo qoyskaaga aad xiriir la yeelanaysaan. Si wada jir ah ayaan ilmahaaga ugu suurtagelinaynaa inuu ku guuleysto himilooyinkiisa dugsiga.
Ardayda dhigata Viljaskolan sidoo kale way dalban karaan boos ka mid ah howlaha firaaqada ee Viljaskolan. Xilliga firaaqadu waxay furan yihiin saacadaha dugsiga ka dib waxayna qaabilaan ardayda illaa simistarka ardaygu ka gaarayo 13 sano. Macallimiinta iyo shaqaalaha xilliga firaaqada ayaa xiriir dhow la yeelan doona waxayna daryeelayaan baahiyaha canug walba si ay u qorsheeyaan howlaha firaaqada. Waxa kale oo muhiim ah in ardayda laftoodu ka qayb qaadan karaan oo saamayn ku yeelan karaan. Waxyaabaha ay ka kooban tahay xilliyada firaaqadu waxay noqon karaan booqashooyinka daraasadda ee tababarka luuqadda ama isboortiga, nashaadaadku waa gudaha iyo dibaddaba. Waqtiyada firaaqada, dhammaan carruurtu waxay fursad u leeyihiin inay la kulmaan asxaabtooda fasallada kale iyo fasallada, waxay abuureysaa nabadgelyo iyo bulsho labadaba.
Waxaad u baahan tahay inaad bixiso khidmad si ilmahaagu ugu helo xilliyada firaaqada. Waxaan la socon doonaa lacagaha magaalada Göteborg ee meelaha nashaadaadka xilliyada firaaqada ah.
Iskuul fur - xitaa iskuulka kadib
Viljaskolan, waxaa ka banaan boos shaqo guri, nolosha ururada, naadiyada isboortiga, muxaadarooyinka, howlaha koorsada ama wax kasta oo kale oo aad rabto inaad iskuulka ka dib dhacdo. Waxaan la shaqeyneynaa qoysaska carruurteenna iyo kuwa kaleba si aan u hubinno in cunug walba waxbarashadiisu ay ugu wanaagsan tahay sida ugu macquulsan.
Viljaskolan wuxuu ku saleysan yahay ballanqaad weyn oo ku saabsan xaquuqda cunug walba ee helitaanka waxbarashada ugu fiican, iyadoo aan loo eegin meesha aad ku nooshahay ama asalka aad ka soo jeedo. Cilmi baaris iyo khibrad ayaa muujineysa in wada shaqeynta ay tahay sida ugu wanaagsan ee natiijooyin wanaagsan looga gaaro iskuulka. Taasi waa sababta aan u dooneyno inaan ula shaqeyno ilmo kasta qoyskiisa iyo bulshada maxalliga ah ee ku nool Angered. Waxaan rabnaa iskuul u furan qoysaska, ururada, ururada isboortiga, ganacsiyada maxaliga ah iyo howlaha bulshada xitaa iskuulka kadib. Xirfadaha luqadeed ee wanaagsan ayaa shuruud u ah aqoonta cusub, ogaanshaha luqado dhowr ah waxay keenaysaa faa'iidooyin badan. Iskuulka Viljaskolan, waxaan u wada shaqeynaa cunug walba.
Waa hamigeena inaan noqono sida ugu macquulsan uguna macquulsan ee ku saabsan ganacsigeenna. Tan macnaheedu waxa weeye inaan markasta ka warbixino macluumaadka ku saabsan tayada iskuulka inta suurtogalka ah.
La shaqee Viljaskolan?
Viljaskolan waxay ku faraxsan tahay lashaqaynta iskuulada kale iyadoon loo eegin milkiilaha ilaa iyo inta aan isla qiimayaasha wadaagno. Aqoon iyo khibrad wanaagsan ayaa loo baahanyahay in la faafiyo si ay waxtar u yeeshaan. Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan la shaqeyno bulshada maxalliga ah ee ku sugan Angered. Haddii aad rabto inaad nala shaqeyso, si xor ah ayaad noola soo xiriiri kartaa, macluumaadka xiriirka waxaad ka heli kartaa halkan.
© 2021 Viljaskolan | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Mulkiilaha Viljaskolan